Cloudy Sense: ကျပ်ငါးထောင်တန် ငွေစက္ကူ၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ
အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျပ်ငါးထောင်တန် ငွေစက္ကူတွေကို စတင်သုံးစွဲတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကျပ်ငါးထောင်တန် ငွေစက္ကူတွေ ထုတ်ဝေလိုက်တာဟာ တနည်းဆိုရင် အာဏာရှင်လက်ထက်မှာ မြန်မာ့စီးပွားရေးစနစ် ဘယ်လောက်ထိ ကမောက်ကမဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို ညွန်းဆိုတဲ့ သက်သေတမျိုးပါပဲ။ ဒီကျပ်ငါးထောင်တန်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငွေကြေးလည်ပတ်သုံးစွဲမှု (circular flow) မှာ ပမာဏကြီးမားတဲ့ ငွေကြေးတွေ သုံးစွဲလာရမှုနဲ့ အဆမတန် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုတွေ ဖြစ်နေခြင်းရဲ့ ပြယုဂ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
-Colander, D. (1995) 'The stories we tell: A reconsideration of AS/AD analysis', Journal of Economic Perspectives, 9: 169-88
-Cukierman, A. (1995) Central Bank Strategy, Credibility and Independence: Theory and Evidence, MOT Press, Cambridge, MA
-Evans, M. (2004) Macroeconomics for Managers, Blackwell Publishing, Oxford
-Gartber, M. (2003) Macroeconomics, Prentice Hall Europe, Harlow
-Romer, D. (2000) 'Keynesian macroeconomics without the LM curve', Journal of Economic Perspectives, 14: 149-69
-Sloman, J. (1999) Economics, 3rd edition, Prentice Hall Europe, Harlow
-(photos- google images)
posted by asoonyouk (အစွန်းရောက်) @ 16:340Comments Links to this post